Impendulo nge plan yendlu ayitholakali | News24
Impendulo nge plan yendlu ayitholakali
SEKUPHELE izinyanga owashonelwa umzali ezama ukuthola iplan yomuzi wakubo ngesizathu sokuthi ufuna ukwakha awunwebe.
Lona wesifazane ohlala endaweni yaseMerlewood uthi waya eUvongo lapho kwathiwa akaye khona bafika bamtshela ukuthi kuzoba nzima ukuthi bayithole iplan yomuzi ngoba kungenzeka ukuthi isemabhukwini amadala.
Uthe usephelewe nayithemba njengoba bathi bazobuyela kuyena umasebeyithola.
Ngokomthethosisekelo wokwakha nokunezelewa kwezindlu, umnikazi womuzi kumele athinthane nomasipala wakhe enze isicelo sokuthi akwazi ukunenzelela umuzi owakhiwa ngaphambi ngomthethosekela omusha.
Lowesifazane uthe naye kuyamuxaka ukuthi yini engenza ukuthi umasipala ungabinayo iplan yendlu ukuze kenezelwe kuyona. iphepha lizamile ukuxhumana nomasipala wase Hibiscus coast ukuze kutholakale ukuthi inkinga ibe kuphi, kepha akutholakalanga ukuphawula